Windows7ကို Speed Up လုပ်ရအောင် ~ မျိုးကို
Windows7ကို Speed Up လုပ်ရအောင်
20:43 Technique, Window7No comments
Window7ဆိုတာ Microsoft က ထုတ်လုပ်လိုက်ပီး သမိုင်းမှာ တော့ Fastest Selling OS လို့ နာမည် ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ New Operating System ပါနော်။အဲဒီ Window7ကို ပိုမို မြန်ဆန်အောင် လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်က အချက်ကလေးတွေကို စမ်းကြည့်ရအောင်ပါ။
This guide covers the following steps, to speed up Windows 7:
Step 1: Cleaning your system of possible malicious programs.
အဆင့်(၁) ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိတဲ့ များစွာသော Program တွေနဲ့ System ကို Clean ပါ။
Step 2: Making sure the “high performance” plan is set.
အဆင့် (၂) high performance” plan ကို Set ထားလားဆိုတာ စစ်ဆေးပေးပါ။
Step 3: Get rid of unnecessary programs and files
အဆင့် (၃) မလိုအပ်တဲ့ Programs တွေ File တွေကို ဖျက်ပေးပါ။ထုတ်ပစ်လိုက်ပါ။
Step 4: Disable/delete unnecessary start up entries
အဆင့် (၄) မလိုအားတဲ့ start up Program တွေကို Disable/delete လုပ်ပေးပါ။
Step 5: Configure the performance setting
အဆင့် (၅) performance setting ကို Configure ပေးပါ။
Step 6: Performadisk cleanup every once inawhile
အဆင့်(၆) မကြာခဏ ဆိုသလို disk cleanup လုပ်ပေးပါ။
Step 7: Turning off unneeded features and components.
အဆင့်(၇) အသုံးမလိုတဲ့ Feature တွေ Components တွေကို Turn Off လုပ်ပါ။
Step 8: Making use of excellent third-party cleanup software
အဆင့်(၈) cleanup software ကိုသုံးပါ။
Step 9: Disabling services that you don’t need running.
အဆင့်(၉) Run နေဖို့ မလိုအပ်တဲ့ Service တွေကို Disable လုပ်ပါ။
Step 10: Cleaning and defragmenting the registry.
အဆင့်(၁၀) Registry ကို Defragment လုပ်ပီး Clean ပါ။
Step 11: Perform disk defragmentation when necessary.
အဆင့်(၁၁) လိုအပ်ရင် Disk Defragementation ကို ဆောင်ရွက်ပါ။
Step 12: Using the ReadyBoost feature if you ownaflash drive.
အဆင့်(၁၂) Flash Drive ရှိမယ်ဆိုရင် Ready Boost Feature ကိုသုံးပါ။
This Video was uploaded from You Tube.I just translated this article as the author, Mayur told.